Ekugqibeleni sineeApple AirTags | Ndisuka mac
I-Apple namhlanje yazise i-AirTag, into encinci, eyenzelwe ubuhle eyanceda ukuba ulandele kwaye ufumane izinto ezibaluleke kakhulu ku-Apple's Fumana iapp yam. Nxibelelana nesipaji, amaqhosha, ubhaka okanye ezinye izinto, iAirTag Sebenzisa umhlaba wonke ukufumana inethiwekhi yam kwaye inokunceda ukukhangela into elahlekileyo.
Amahemuhemu ayazaliseka kwaye ekugqibeleni sinee-AirTags unathi. Ezi zixhobo zincinci zingasinceda ukuba sifumane phantse nantoni na esiphulukene nayo enkosi kwiTekhnoloji ye-Fumana.
Ukuthatha ithuba kuthungelwano olukhulu lwehlabathi Fumana kwam kunokunceda ekufumaneni into elahlekileyo. Yonke into ngelixa igcina idatha yendawo yangasese kwaye ingaziwa ngokufihla ukuphela. I-AirTag inokuthengwa kwiphakheji enye okanye ezine nge- $ 29 kunye ne- $ 99 ngokwahlukeneyo. Ifumaneka ukusuka ngolwesiHlanu, Epreli 30.
UKaiann Drance, Usekela-Mongameli we-Apple kwiNtengiso yeMveliso yeHlabathi ye-iPhone:
Siyavuya ukuzisa amandla amangalisayo kubasebenzisi be-iPhone ngokuziswa kwe-AirTag. Ukuthatha ithuba lokufumana inethiwekhi yam enkulu, ukubanceda baqonde ukulandelela kunye nokufumana izinto ezibalulekileyo ebomini babo. Ngoyilo lwayo, amava okukhangela angazange abonwe, kunye nezinto ezizimeleyo ezakhelweyo kunye nezokhuseleko, iAirTag iya kubonelela abathengi ngenye indlela yokusebenzisa amandla e-Apple ecosystem kunye nokuphucula ukusebenza kwe-iPhone.
I-AirTag nganye incinci kwaye ijikeleze ngokulula, inezinto ezichanekileyo ezenziwe ngentsimbi engenasici, kunye namanzi kunye nothuli IP67. Iipesenti ezili-100 zenziwe ngokwezifiso.Isithethi esakhelwe-ngaphakathi sidlala izandi ukunceda ukusifumana isixhobo, ngelixa isiciko esisuswayo sikwenza kube lula kubasebenzisi ukubuyisela ibhetri.
I-AirTag ine Amava afanayo okuseta njengeeAirPods. Kufuneka usondeze isixhobo kwi-iPhone kwaye iza kuqhagamshela. Abasebenzisi banokwabela i-AirTag kwinto ethile kwaye bayinike igama ngexabiso elingagqibekanga njenge- "Keys" okanye "Jacket", okanye banike igama lesiko abalithandayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ekugqibeleni sineeApple AirTags